Factorylọ ọrụ China Nkewa na C emepụta China Boselan
Agba mkpuchi: Enwere ike ịgbanwe agba
Ihe mkpuchi mkpuchi: 0.25 ~ 0.40mm
Ọnọdụ PH: Ọkọlọtọ PH: 3 ~ 11; Pụrụ iche PH: 1 ~ 14
Siri ike: 6,0 Mohs
Nnwale Spark: > 1500V
Nnwere onwe nke CSTR, dabara adaba maka ụlọ ọrụ mmepụta biogas obere na nke na-ebuwanye ibu na ọrụ ugbo ga - adigide mmepe.The nkewapụ nke onye na - ejide gas na anaerobic tank na - eme ka njikwa na nchekwa gas, yana ndozi nke akụrụngwa.The ụlọ ọrụ na ugbo. n’enye nnukwu mmanụ arụpụta ihe, onye nwere ihe dị iche nwere ike ichekwa gas n’enweghị ihe na-emebi ya. Ọ nwere ike bute okpomoku, ọkụ ọkụ na nri esi nri. Ejikọtara ya na ike anyanwụ, ọ nwere ike mezuo usoro akụ na ụba gburugburu ebe obibi zuru oke.
Orzọ Pọpụ Pụrụ Iche Pụrụ Iche Pụrụ Iche
Boselan mepụtara usoro enamel nke ya nke na-eme ka porcelain anyị nwekwuo glazed, nke na-adọrọ adọrọ ma na-aga nke ọma. Agbanarị pinhole na azụ azụ.
Nkà na ụzụ Edge Enameled
Ahịhịa Boselan kpuchie otu ihe ahụ enameled iji zere electrolysis nke dissimilar ọla, nchara na imebi ihe nke njikọ ahụ.
Nkọwa ọkọlọtọ Enamel steel Plate
Olu (m 3 )
Ala (oyi akwa)
Ọnụ ọgụgụ Plate
Chart usoro nhazi dị mfe
Nke gara aga: Mkpokọta mmekọrịta
Osote: Ntinye akwukwo otu a
Nchekwa Nchekwa Biogas